Inona no hatao raha mihena ny fahombiazan'ny milina fanaovana carton
Ny masinin-tsarety dia milina manana fahombiazana sy kalitao tena tsara. Ny fampiasana tsy ara-dalàna, ny tsy fikojakojana ara-potoana sns sns dia antony na fitaomana tsy ahafahan'ny milina fanaovana cartonement mandeha ara-dalàna. Afaka miasa tsy tapaka mandritra ny fotoana maharitra ilay milina fanaovana carton ...
Ny hoavin'ny fampandrosoana ho avy amin'ny milina fanamboarana mandeha ho azy manan-tsaina
Ny olana sasany efa misy ao amin'ny indostrian'ny milina famonosana masinin-tany dia tokony hovahana haingana araka izay azo atao. Raha te hahatratra ny ambaratonga avo lenta haingana araka izay tratra, dia mbola misy teknolojia maro izay milina fanaovana baoritra fireneko ...
Tombony amin'ny fonosana mandeha ho azy sy ny milina fanaovana carton
1. Ny fonosana automatique feno sy ny cartoning automatique dia mampihena ny vidin'ny mpiasa ary mitazona ny hafainganana, ny marina ary ny fitoniana. 2. Hatsarao ny famokarana asa. Ny hafainganam-pandehan'ilay milina fanaovana carton automatique dia haingana be noho ny fonosana amin'ny tanana. 3. Raha miasa ny fonosana amin'ny tanana ...